Phil Foden oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Manchester City – Gool FM
Dajiye February 22, 2020
(Manchester) 22 Feb 2020. Da’ayarka kooxda Manchester City ee Phil Foden ayaa ka jawaab celiyay warka xanta ah ee soo baxaya kaas oo ku aadan in kooxdiisa uu amaah kaga tagayo kaddib markii uu waayay fursado badan oo uu kaga soo muuqan lahaa naadiga macallin Pep Guardiola .
19-jirkan ayaa kaliya 2 kullan xagaagan kooxdiisa ugu soo bilowday horyaalka kubadda cagta England ee Preimer Leagea, inkastoo lagu tilmaamo in uu yahay mid aad u wanaagsan.
Foden ayaa sidoo kale qaab ciyaared fiican ku soo bandhigay kubadda cagta horyaalka Yurub ee UEFA Champions Leagea, kaddib markii uu 2 gool dhaliyay, 2 kalena caawinad loo diiwan galiyay, 187 daqiiqo oo uu ciyaaray.
Foden oo ka tirsan xulka qaranka England ciyaaryahanada da’adoodu ka hooseyso 21 sano ayaa la soo jeediyay in kooxda amaah uu kaga tago suuqii Janaayo si uu u hormariyo wax qabadkiisa.
Hadaba, Guardiola ayaan xiiseyney in xiddigiisa uu amaah muddo dheer ah ku diro, iyadoo Foden uu rumeysan yahay in go’aan sax ah uu qaatay maadama uu iska sii joogay kooxdiisa.
Mar la weydiiyay haddii uusan dooneyn in koox kale uu ku biiro, Foden ayaa u sheegay shabakada “90min”.
“Haa iyo wax la mid ah ma’ahan, maan ciyaarin wax daqiiqad ah gabi ahaanba”.
“Hada waxaan ka soo muuqday City 50 kulan, marka tirada ayaa hadleysa.
“Waxaan rabaa in aan sii joogo halkan muddada ugu dheer ee aan awoodo”.